साम्राज्ञीलाई भुवन केसीको काउन्टर: जुन थालमा खायो, त्यही थाल प्वाल पार्ने ?
केही दिनअगाडि नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा एक भिडियो पोष्ट गर्दै चलचित्र क्षेत्रमा भोग्नुपरेको पीडा पोखिन् । उनले ८ वटा चलचित्रमा काम गर्दा ३ चलचित्रको टिमबाट आफूलाई निकै शोषण भएको बताएकी छन् ।
आफूमाथि ती ठूला मानिएका ब्यानरले गरेको व्यवहार शब्दमा भन्न नसक्ने नै भएको साम्राज्ञीले बताएकी छन् । सुटिङ सेटमा आफूलाई खाना पनि राम्रोसँग नदिएको साम्राज्ञीको गुनासो थियो ।
साम्राज्ञीले त्यहाँ कुन निर्माण पक्षले आफूमाथि शोषण गरेको भन्ने कुरा खुलाएकी छैनन् । तर, पनि साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति डेब्यू चलचित्र 'ड्रिम्स' निर्माता/निर्देशक भुवन केसीप्रति लक्षित भएको प्रष्ट हुन्छ ।
साम्राज्ञीको उक्त अभिव्यक्तिमा भुवन केसीले उत्तर फर्काएका छन् । आइतबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले साम्राज्ञीलाई काउन्टर दिएका हुन् ।
भुवनले साम्राज्ञीलाई अहिले पनि 'ड्रिम्स' को नाम बेचेर खाइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, 'खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन चलचित्रको नाम बेचेर खाइरहेकी छन् ? जुन थालमा खाने, त्यही थाल दुलो पार्ने ?'
भुवनले 'सामाजिक सञ्जालमा गर्नेबराबर अभिनय चलचित्रमा पनि गरे हुने नि !' भन्दै साम्राज्ञीको अभिनयप्रति पनि प्रश्न खडा गरेका छन् ।